I-china Hydrate eyomileyo ipakethe mveliso kunye nabathengisi | Huizhou
Iipakethe ze-Ice zeHuizhou Hydrate ezomileyo zezinye iindlela zokupakisha umkhenkce kwimarike ngemisebenzi efanayo. Iipakethe ze-Ice zeHiizhou Hydrate ezomileyo zenzelwe ukutya okutsha kunye nezinye izinto ezinobushushu ngexesha lokuhanjiswa kwazo kwetyhubhu ebandayo, zihlala zithandwa ngokutya kwaselwandle. Iipakethi zomkhenkce ezomileyo ze-Hydrate kufanele ukuba zizise iqondo lobushushu kwindawo enye phantsi kolawulo ngokudlulisa ubushushu obupholileyo.
I-1.Huizhou Hydrate Dry Ice Packs zezinye iindlela zokupakisha umkhenkce kwimarike ngemisebenzi efanayo. Iipakethe ze-Ice zeHiizhou Hydrate ezomileyo zenzelwe ukutya okutsha kunye nezinye izinto ezinobushushu ngexesha lokuhanjiswa kwazo kwetyhubhu ebandayo, zihlala zithandwa ngokutya kwaselwandle. Iipakethi zomkhenkce ezomileyo ze-Hydrate kufanele ukuba zizise iqondo lobushushu kwindawo enye phantsi kolawulo ngokudlulisa ubushushu obupholileyo.
2.Hydrate pack ice owomileyo yenziwe iziqwenga ezincinci eziphindiweyo kunye ne-PCM granular powder ngaphakathi. Unga chaza ubungakanani bakho ngokukhululekileyo ngamaqhekeza amancinci kwiimfuno zakho. Zisetyenziselwa izinto ngokubanzi ngamanzi athile njengokutya kolwandle okusongela okanye ukusonga imeko.
Sixabiseke kakhulu kuphuhliso oluzinzileyo kumhlaba wethu esizama ukuvelisa izinto ezingaphezulu Indawo intleKuba hydrate ngumkhenkce owomileyo, izinto zangaphandle zebhegi zinokukhethwa njenge ezinokuboliswa ziintsholongwane iphepha lobugcisa.
I-1.Hydrate eyomileyo i-Ice Pack yenzelwe ukuzisa ukuphola kwindawo ekufutshane nayo, ngokutshisa nokubanda komoya oshushu okanye uhanjiso.
Kwimihlaba yokutya esandula ukwenziwa, zisetyenziselwa ukuhambisa ukutya okutsha, okonakalayo kunye nobushushu, njengoku: inyama, ukutya kwaselwandle, iziqhamo nemifuno, ukutya okulungiselelwe, ukutya okubandayo, iintyatyambo, ubisi, njl njl, ngakumbi ukutya kwaselwandle kunye nezinto amanzi okanye ukusonga nokusonga okufunekayo.
3.Kwaye ukuzisebenzisa, zinokusetyenziselwa uncedo lokuqala, iintlungu okanye ukwenzakala, ukuzisa umkhuhlane. Kwangelo xesha, zikwalungele ukusetyenziswa kwangaphandle ukuba zibeka ipakethi yomkhenkce wehydrate ngaphakathi kwesingxobo sasemini, ibhegi epholileyo ukugcina ukutya okanye iziselo ezibandayo xa uhamba intaba, iipikniki, ukuhamba ngephenyane nokuloba.
4 Ukongeza, ukuba ubeka iqabunga lomkhenkce owomileyo kwifriji yakho, inokugcina umbane okanye ikhulule ukubanda kwaye ugcine ifriji kubushushu befriji xa ucinyiwe.
I-5.Hydrate iipakethe zomkhenkce ezomileyo zicetyiswa kakhulu ukuhambisa iintlanzi okanye ezinye iintlanzi zaselwandle, ezinje ngeentlanzi, i-shrimp, unonkala, i-shellfish, njl.
Amacandelo / iphepha Ubungakanani(I-CM) Izinto zeBhegi Ukutshintsha kwesigaba Ubushushu
Elaminethiweyo amalaphu angalukanga
I-1Hydrate ipakethi yomkhenkce owomileyo yenye yeendlela ezizezinye zokupakisha iqhwa lejeli yesiqhelo.Ukuxhamla kukuba banokuzisonga iimveliso zakho nokuba zingumkhenkce.
2.Non-ityhefu, kwaye bavavanywa nge Ingxelo ye-Acute Oral Toxicity Report.
Ukukhanya okulula kunye nokuhamba ngokulula (Izinto zangaphakathi zifana nomgubo.): Hydrate eyomileyo ipakethi yomkhenkce ihlala ibhityile njengesiqwenga sephepha ngaphambi kokufaka amanzi ukuze zikhanyise kwaye zigcinele indawo enexabiso ngakumbi kuwe.
4.Ihydrate iphepha lomkhenkce elomileyo lisikwa ngokulula ecaleni kwemigangatho yesayizi ebhetyebhetye kwaye linokusongwa simahla kwaye lisongelwe ngokuqinileyo.
5.Environmental-friendly: Zingasetyenziswa ngokuphindaphindiweyo phambi komhla wokuphelelwa kwaye izinto ezingxolayo ibhegi yangaphandle iyafumaneka.
1.Water efunekayo kwaye kufuneka emkhenkceni phambi ukusetyenziswa.
2.Ukusebenza ngokugqwesileyo, nceda ungene emanzini ngokupheleleyo malunga nemizuzu eli-15 kwaye uqiniseke ukuba bakhenkceziswe ngokupheleleyo kwisikhenkcisi, kwifriji okanye kwindlu efrijini ngaphambi kokuyisebenzisa.
3.Ukuba kukho nayiphi na into evuzayo okanye eyonakeleyo, yigungxule ngamanzi uze uyilahle.
4.I-Hydrate Dry Ice Pack inokusetyenziswa iphindaphindwe ngaphambi komhla wokuphelelwa kwayo.
5.Ukuba i-Hydrate Dry Ice Pack iya isiba ncinci emanzini, nceda cwina amanzi aneleyo kwakhona ukuqinisekisa ukuba isebenza kakuhle.
Egqithileyo Isitena Somkhenkce
Okulandelayo: Ipakethe ye-Inaliti yamanzi